China Zonke-in-nye indlela yokumakisha umatshini mveliso kunye nabathengisi | OOMATSHINI be-ACE
Yonke into in-in enye yokumakisha umatshini
I-TW-FJ Yonke into inye yeThermoplastic Kneader Umatshini wokuMakisha ngumatshini osebenza ngesandla oshukumayo odityanisiweyo kunye neketile eshushu eshushu kunye nomatshini wokumakisha we-kneader, osebenza kwiiprojekthi ezincinci kodwa ezichithakeleyo nezithe saa ezifana nokwahlukana, isikolo, indawo yokuhlala kunye nomzi mveliso. Lo matshini mncinci ngobukhulu kunye nobunzima, kulula kwaye ulungele ukusebenza ngabaqhubi ababini kuphela bokusebenza.
Umatshini usebenza ngokukodwa kwiiprojekthi ezincinci kodwa ezichithachithekileyo ezinje ngeendawo zokupaka, isikolo, indawo yokuhlala kunye nomzi mveliso. Lo matshini mncinci ngobukhulu kunye nobunzima, kulula kwaye ulungele ukusebenza ngabaqhubi ababini kuphela bokusebenza.
I-TW-FJ Yonke into-in-nye Umatshini wokuMakisha weThermoplastic Kneader
Imilinganiselo engaphandle (L * W * H) Ubukhulu: 1200X900X1100mm
Ubunzima Iyonke kumatshini 220KG
Ukwaleka izinto zetanki 120KG
Umthamo webhokisi yeglasi yeglasi 25KG
Ubungqingili bengubo 1.2-4mm
Indlela yokuhambisa intsimbi Ziqhutywa ziGear, ngokuzenzekelayo Bamba
Ubushushu bezinto zokutshisa ezifudumeleyo 170-220 ℃
LPG isilinda eqhelekileyo 15KG
Ububanzi bokumakisha I-100、150,200、300mm, iyasebenza ngakumbi kwimigca yeqwaras ye-400、450mm
Ukusebenza kwemihla ngemihla 150m2
Ngaba ukuxhobisa ukonyusa umqhubi, ukonyusa ipleyiti, ukonyusa isitulo？ Ukukhulisa iPlate / Ukukhuthaza uSihlalo
Ityathanga eliqhutywa ngesandla liqhuba izinto zokunyibilikisa, zikhanyise kwaye ziluncedo ekusebenzeni.
I-2.Iziko elikhethekileyo eliphakathi koxinzelelo lwesithando sixhotyiselwe ukusetyenziswa kwemizi-mveliso, enobuchule obuphezulu bokushisa kunye nokunyibilika okukhawulezayo.
I-3.Ivalve yokutshintsha elawulwayo yendlela yomlilo inokuvumela umqhubi ukuba aqaphele imeko yomlilo kwaye alungelelanise umlawuli wendlela yomlilo kunye nedangatye. Yiyo ke loo nto yenza ukuba umsebenzi wokumakisha ukhuseleke kwaye usebenze ngakumbi.
4.Izinto ezimbini zokuhambisa ezikhutshiweyo zokukhupha igesi ngexesha ukugcina indawo yokusebenza efanelekileyo.
5.Izikhuselo ezisuswayo ezenziwe kathathu zenza kube lula ukucoca iketile kunye nokutshintsha izinto ezinyibilika ngemibala eyahlukeneyo.
1.Can Ndibuhlengahlengise ubukhulu bomgca? Njani?
3. Kuthekani ngenkonzo yasemva kwentengiso?
A: A: Sinoxanduva lokubonelela ngeengcebiso zobuchwephesha kubomi bonke beshelf. Sinceda ukusombulula iingxaki ngeWhatsapp, Skype, kunye ne-imeyile ngokuthumela imifanekiso kunye neevidiyo.
4.Uyiphawula njani imigca kububanzi obahlukeneyo?
A: Kuko kukhetho lwakho. Ngokwesiqhelo, sicebisa ukuhanjiswa kolwandle okubonelela ngamaxabiso afanelekileyo. Kwakhona, kwiindawo ezingasasebenziyo, inokuba ikwi-FEDX, DHL kunye ne-expression yabo yamanye amazwe ..
Egqithileyo Umatshini wokumakisha wendlela obandayo
Okulandelayo: Umatshini wokuMakisha endlela
Honda Gx35 Concrete neentsimbi Ukugqiba Screed ...
I-1680KG ene-0.045CBM Hydraulic Mini Excavator